Zimbabwe: Ostracized albinos describe life as hell on earth - Deseret News
By Associated Press Jun 18, 2016, 9:30am MDT
Share All sharing options for: Zimbabwe: Ostracized albinos describe life as hell on earth
An Albino girl gets her make up done during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
Members of the Albino community talks with colleagues during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
An Albino child, centre, joins marchers on the streets of Harare during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
An Albino child and his friend follow proceedings during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
An Albino girl looks at herself in the mirror after getting her make up done, during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
A mother holds her Albino child during a march on the streets of Harare to commemorate World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
An Albino woman looks at herself in the mirror after getting her make up done during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
An Albino child marches on the streets of Harare during belated World Albinism Awareness Day in the capital Harare, Saturday, June, 18, 2016. Rejected, ostracized and laughed at, albinos and their parents in Zimbabwe describe life in a country with little tolerance for them as hell on earth. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press